FX-arọ 'Blood Quantum' na-adaba na Shudder Na Mgbasa Mwepụta
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ FX-arọ 'Blood Quantum' na-adaba na Shudder Na Mgbasa Mwepụta
edere ya Timothy Rawles April 28, 2020
Na ihe otu onye nkatọ kpọrọ "Ihe obi ụtọ na obi ụtọ dị ka hel," Ọnụ Ọbara nwetara ihe ijuanya na Shudder n'ụtụtụ a.
Dị ka akụkụ nke "Halfway to Halloween Month" ọrụ nkwanye ahụ kpebiri na ọ ga-abụ oge zuru oke iji zipu mmemme a nabatara nke ọma n'elu ikpo okwu ha.
“Anyị maara na ihe nkiri ahụ dị mkpa ma na-abịa n’oge mgbe anyị nwetara ya n’afọ gara aga, mana nyere ihe ndị mere n’oge na-adịbeghị anya, Ọnụ ỌbaraIsi okwu nke iche, ịtụ ụjọ ịgbasa, yana ụmụ mmadụ na - alụ ọgụ maka nje virus zuru ụwa ọnụ ka bara uru karịa, ”ka Shudder General Manager Craig Engler kwuru. “Mgbe a na-enweghị ike ịhapụ mbipụta nke ihe nkiri n’ihi ọrịa na-efe ụwa, anyị kpebiri iji mee ngagharị nke ihe nkiri Barnaby iji mee ngwangwa ka o nwee ike iru nnukwu ndị na-ege ntị.”
Ihe nkiri ndị a ọrịa nke ndị nwụrụ anwụ na-alọghachi ndụ dị nso Mi'gmaq echekwala Red Crow nke na - enweghị nsogbu ya. Traylor (Greyeyes), onye ohi agbụrụ, "ga-echekwa nwa ya nwanyị dị ime, ndị gbara ọsọ ndụ apocalyptic, ma debe riffraff site na ọtụtụ ndị ozu na-eje ije."
Onye nduzi Jeff Barnaby (Hykpụrụ maka ụmụaka Ghouls) bụ First Nations filmmaker a mụrụ na Mi'gmaq, ebe Ọnụ Ọbara na-ewere ọnọdụ. Ọ na-arụ ọrụ anọ dị ka onye edemede, onye nduzi, onye editọ na onye na-ede egwú. Ihe nkiri ya na-esitekarị n'etiti ụmụ amaala ma na-ese onyinyo nke na-agbasa ma na-agbasa nke ndụ na ọdịbendị ndị na-esote mgbe ọchịchị - na nke a, na-ese ya na ọbara.
Ọnụ Ọbara malitere na TIFF's Midnight Madness ngọngọ na 2019 na nyocha dị mma. onye na-akatọ iHorror bụ Kelly McNeely na-ekwu banyere mmetụta ọjọọ, “Nke a bụ visceral ịse ga-eme Tom Savini mpako, na oge na-asọpụrụ otu n'ime ihe ndị kasị obi ọjọọ Mpaghara Dawn nke Nwụrụ Anwụ.
Nke a bụ ụgbọala na-adọkpụ:
'Halloween Na-egbu' David Gordon Green Iji Helm HBO 'Hellraiser'
Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 4-28-20